E6010 dia electrode karazana sodium rutile-cellulosic. Azo lasina amin'ny toerana rehetra (indrindra ho an'ny toerana avo-midina) amin'ny DC + ihany. Izy io dia manana fahombiazana tsara toy ny arc azo antoka, spatter kely, fanesorana ny slag mora ary fahaiza-manjaka sns. Fanaraha-maso pisinina molten tsara kokoa, herin'ny arc mahery ary fidirana lalindalina kokoa amin'ny toerana avo-down.
Ny electrode welding-antsika dia vitsy kokoa ny spatters, tsy misy setroka, arc azo antoka, mora simba, kely ny fako ary sns. Ny tombony tena manan-danja indrindra amin'ny electrode welding-antsika dia ny famafana ny otrikaina ho azy.
FAMONJENA TSARA NY LOHATENY REHETRA: (Wt.%)
FANANAN-KEVITRA METIKA NY LOHATENY REHETRA:
PROCEDURES OPERATING TYPICAL: (DC +)
5kg / boaty, boaty 4 / baoritra, 20kgs / baoritra, 50 cartes / pallet. 21MT -26MT isaky ny 1X20 "FCL.
Shijiazhuang Tianqiao Welding Materials Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2007. Amin'ny maha mpanamboatra electrode welding mahery vaika antsika, manana hery ara-teknika matanjaka izahay, fitaovana fitiliana vokatra feno mba hahafahanay mitazona ny kalitaon'ny vokatra azo antoka. Ny vokatray dia misy karazana electrode welding miaraka amin'ny marika "Yuanqiao", "Changshan", toy ny vy ambany karbaona, vy vy Iow alIoy, vy mahazaka hafanana, vy ambany, hafanana vy, vy vy, vy elektrika miorina mafy sy maro samihafa vovoka mifangaro mifangaro.
Teo aloha: Vovoka welding: E6013
Manaraka: E71T-GS— tariby fanamafisam-peo mihodina
Atsofohy vy vy vy, vy vy, electrode welding, Ss Welding Electrode, Tsorakazo vy tsy mitovy, Kavina vy 1.5 Mm,